Miyaan bilaabaa samafal si aan ugu caawiyo dadka guryahooda ku nool? - Amjambo Africa
Xubnaha bulshada aya mararka qaarkood nagala hadla sidii loo bilaabi lahaa hay’ad samafal ah si looga caawiyo dadka guryahooda ku sugan. Laakiin tani ma noqon karto xalka ugu fiican ee dhibaatada in la xaliyo – runtiina waxay abuuri karaa caqabado cusub. Helitaanka deeqaha ama tabarucaadka si loo joogteeyo samafal ahaan badanaa waxay u baahan tahay waqti badan oo tabaruc ah dad badan, oo ay ku jiraan kuwa loo qoro inay ka shaqeeya guddiga. Waxaan la xiriirnay Ururka Maine ee aan macaash doonka ahayn (MANP) si aan wax uga baranno waxa ay ku qaadaneyso bilowga macaash doon, iyo inaan ka caawinno akhristayaasha inay ogaadaan inay tahay doorashada saxda ah iyaga.
Waxaan rabaa inaan ka bilaabo macaashkeyga halkan Maine inaan lacag u diro dibada. Sideen ku gartaa waxa la sameeyo
Tallaabada ugu horreysa ee ugu weyn ayaa ah in laga barto doorka hay’adaha aan macaash doonka ahayn ee Mareykanka, maaddaama qaar ka mid ah xeerarka iyo siyaabaha ay u shaqeeyaan ay ka duwan yihiin waddamada kale. MANP waxay lashaqeysaa SCORE iyo Portland’s Office of Opportunity Economic si ay u bixiyaan aqoon isweydaarsiyo bilaash ah oo ku saabsan bilaabida macaash-doonka. Midka ku xigi doonaa Agosto 3. Isdiiwaangeli https://portlandme.score.org/event/what-does-it-mean-be-nonprofit-us-1
Haddii aan bilaabo hay’adda samafal ah, miyaan u isticmaali karaa inaan lacag ugu diro qoyska iyo saaxiibbada dibadda?
Ilaa aad aruuriso lacag aad u tiro badan, sameynta hay’ad samafal ah ma noqon karto ikhtiyaarka ugu fiican. Waxaan soo jeedineynaa inaad lashaqeyso qareen fahamsan faa’iido la’aanta iyo sharciga caalamiga ah si looga fogaado ganaaxyada qaaliga ah iyo dhibaatooyinka sharciga. Shakhsiyaadka uma \_”lahaadaan\_” macaash doon sida qof ganacsi u yeelan karo. Dhammaan ururada aan macaash doonka ahayn waxaa looga baahan yahay inay yeeshaan guddi maamul, taas oo ah koox dad ah oo masuul ka ah xubinta in hay’adda samafalka ay fulinayso hadaf keeda ayna raacayso xeerarka gobolka iyo federaalka. Guddiga ayaa ku lug leh go’aaminta barnaamijyada iyo adeegyada la bixiyo iyo sida lacagta loo isticmaalaa. Lacag u dirista caalamku waa suurto gal, laakiin waxay u baahan kartaa cilmi baaris iyo dukumiinti gaar ah, kharashaadka iyo deeqaha waa inay buuxiyaan shahaadooyin gaar ah, waana in si ku habboon loo diiwaangeliyo oo loola socdo. Xaalada badankood, lacagtani kuma dhici karto oo keliya xubnaha qoyska. Waxay ku irantahay wadanka aad lacagta udireyso, xeerarka waxay noqon karaan kuwo adag.
Ma jiraan qaabab kale oo lacag loogu diri karo dibadda si aan u taageero beeshayda?
Waxaad ka raadin kartaa ururada jira ee aan macaash doonka ahayn, ama halkan gudaha Mareykanka ama gurigaaga hooyo, oo horiba u bixiyey adeega bulshada aad daryeesho. La xiriir hay’adahaas si aad lacag ugu tabarucdo ama aad u aragto sida kale ee aad u caawin karto.Waxaad sidoo kale soo aruurin karaa lacag si aad si toos ah ugu celiso dalkaaga. Deeq-bixiyeyaashu ma awoodi doonaan inay ka jaraan deeqahaas canshuuraha Mareykanka, laakiin deeq-bixiyeyaal badan oo aan ahayn qodob weyn. La xiriir xafiiskayaga haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho ururro la jaan qaada himiladaada. Email u dir [email protected]
PreviousXusuusnow is daryeelid adiga oo caawinaya kuwa kale
NextFaa’iidooyinka iyo qasaaraha qaababka lacag dirista